Mayelana NATHI-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
Mayelana nekhampasi yethu
I-Ningbo Joiwo Explosion-proof Science and Technology Co, Ltd. itholakala eGuoxiangqiao Industrial Park, eYuyao City, eZhejiang Province.Umugqa womkhiqizo wethu uhlanganisa ukuqhuma kocingo, ucingo olungamelana nesimo sezulu, ucingo lwasejele nolunye ucingo lomphakathi olumelana nokucekelwa phansi. Sakha izingxenye eziningi zamafoni ngokwethu futhi kusinika inzuzo enkulu ngaphezu kwezindleko nokulawulwa kwekhwalithi. Izingcingo zethu zisetshenziswa kabanzi emajele, ezikoleni, emikhunjini, kuphethiloli nakupulatifomu wokumba uwoyela njll. Amafoni ethu asejele nawo athole idumela elihle kumakhasimende ethu ase-USA, eYurophu naseMpumalanga Ephakathi.
Ifektri yethu yathunyelwa esizeni esisha ngo-Ephreli 2012 enendawo yokukhiqiza engama-4,500 square metres futhi ifakwe imishini yesimanje yokukhiqiza nokucubungula. Inkampani yethu inamandla we-R & D, ukukhiqiza, ukuhlangana, ukuhlola, ukufakwa kanye nezinsizakalo zobuchwepheshe. Sinamathela kumgomo "wamakhasimende" futhi sihlala sihambisana nobambiswano lwesikhathi eside namasu namakhasimende ethu, silwela ukuba yiphayona emkhakheni futhi sakhe uphawu olusezingeni lokuqala.
Isikhathi sokuqala ukukunikeza izisombululo zezobuchwepheshe.
Sisebenza ibhizinisi emhlabeni wonke futhi sigxile ezifundeni zaseYurophu, e-Asia nase-Afrika nasekwakhiweni kobudlelwano obuqinile namakhasimende ethu. Kodwa-ke, uhla lwemikhiqizo luhlala lukhula ngokuya ngezidingo zamakhasimende ethu.
Isilinganiso esisheshayo Sesevisi yokuSampula.
Inqubo Yesibili Yokusebenzela
Indawo Yokucindezela Yezindaba
Abenzi Abasebenza Ngobuchwepheshe
Ukwaneliseka kwamakhasimende umgomo wethu omkhulu e-JOIWO. Sizoqhubeka nokwenza ngcono uhlelo lwethu lokuphathwa kwebhizinisi kanye nohlelo lwenkonzo yokuthengisa ngemuva, ngakho-ke singanikeza amakhasimende azungeze umsebenzi ucingo oluhamba phambili lokuqhuma, ucingo oluthinta isimo sezulu, ucingo lwejele nolunye ucingo lomphakathi olungavumelani nokucekelwa phansi, oluxhaswe insizakalo yethu enhle kakhulu. Ngaso sonke isikhathi senza konke okusemandleni ethu ukuhlangabezana nazo zonke izidingo zamakhasimende ethu.